2021 Dhalashada Grenada
Si ballaaran ayaa loo yaqaan "Jasiiradda Spice", Grenada waxay kuu soo jeedineysaa adiga fiiro gaar ah, fiiro gaar ah u leh meelaha dhaadheer, buuraha iyo buuraha Quruxdaani waa qeyb ka mid ah muuqaalada sasabashada badan, waxaana jira fursad weyn oo aan looga hor imaan karin booqashada saddexda jasiiradood ee ugu quruxda badan. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka iyo sababaha loo soo jiidan karo maalgashadayaasha Grenada, waxaa sidoo kale jira ciyaaro isboorti oo biyaha hoostooda ah, shiraac, makhaayado qurux badan, iyo khadadka xeebta ee xiisaha leh
Astaamaha iyo faa'iidooyinka gaarka ah:
diiwaangelin degdeg ah, oo aan ka badnayn afar bilood;
ka mid noqoshada carruurta da'doodu ka yar tahay 25;
ka mid noqoshada waalidiinta ka weyn da'da 65;
wax shuruud u ah deganaanshaha tooska ah;
looma baahna joogitaan shaqsiyeed Grenada si loo soo gudbiyo arji;
looma baahna wareysiyo, waxbarasho, khibrad maamul;
fiiso la'aan markii la galayo dhul ka badan 140 dal, oo ay ku jiraan aagga Schengen;
iyadoo la raacayo heshiiska ay Grenada la saxiixatay Mareykanka, dhalashada Grenada waxay siineysaa fursad lagu shaqeeyo, oo ay ku jiraan ganacsiga, iyo sidoo kale ku noolaanshaha Mareykanka;
cashuur dhaafka dakhliga aduunka;
shuruud kuma xirna in laga gudbo imtixaanka aqoonta luqadda;
diiwaangelinta baasaboorka rasmiga ah ee Grenada 4 bilood gudahood.
Sida loo helo dhalashada Grenada:
1. Hanti ma guurto
Adoo maalgashi ku sameynaya guryaha la ansixiyay.
Cabirka maalgashiga waa inuu ahaadaa ugu yaraan $ 350 kun, lacagaha waa inay lahaadaan codsadaha tooska ah ugu yaraan 4 sano. Qof kasta oo ku xiga daryeelka codsadaha, qadarka maalgashi dheeraad ah waa $ 25 kun.
2. Maalgashi aan la soo celin karin
US $ 150 - codsadaha weyn;
US $ 200 - oo ah codsadaha weyn + 000 qof ee uu daryeelayo
Kharashaadka xaqiijinta ku lug lahaanshaha dembiga
US $ 5 - codsadaha guud, kuwa ku tiirsan da'da 000 sano
US $ 2 - Carruurta da'doodu tahay 000 illaa 12
US $ 3 - codsadaha weyn, kuwa ku tiirsan da'da 000;
US $ 2 - Carruurta da'doodu ka yar tahay 000 sano.
Jinsiyadda Grenada RUS
Jinsiyadda Grenada ENG
Ku laabo Jinsiyadda Maalgashiga